7 WhatsApp ကိုညီတူညီမျှကောင်းမွန်သော (သို့) ပိုကောင်းသည့်အခြားနည်းလမ်းများ | Gadget သတင်း
WhatsApp ကိုအခြားနည်းလမ်း ၇ ခုဖြင့်အညီအမျှကောင်းသို့မဟုတ်ပိုကောင်းသည်
Villamandos | | ယေဘုယျ, WhatsApp ကို
လွန်ခဲ့သောအချိန်ကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည် ၀ ယ်ယူမှုနှင့်အတူခိုင်မာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် WhatsApp ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိသုံးစွဲသူအများဆုံးနှင့်ချက်ချင်းလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application ဖြစ်လာပြီး၊ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်မည်မှာသေချာသည်။ အစပိုင်း၌၎င်းသည် application နှစ်ခုလုံး၏ပေါင်းစည်းမှုကိုထင်မြင်ယူဆသည့်အတိုင်းသို့မဟုတ်လူကြိုက်များသောလူမှုကွန်ယက်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးရရှိရန်မကြိုးစားခဲ့ပါ။
ဒါပေမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ WhatsApp ဟာ Facebook နဲ့ဒေတာကိုမျှဝေရန်အတွက်အသုံးပြုသူများထံမှခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခဲ့သည်။ ဤသည်သည်ရက်ပေါင်းများစွာလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application ကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်တာဝန်ဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွင်းကွင်းကိုဖြတ်သန်းရန်အလွန်ခက်ခဲသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအပလီကေးရှင်းများအကြားမျှဝေခြင်းကိုမလိုလားသောကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အားသင်ပြမည်။ WhatsApp ကိုအခြားရွေးချယ်စရာ ၇ ခုသို့မဟုတ်လူကြိုက်များသော application ထက် ပို၍ ကောင်းမွန်သည်.
ဤကိစ္စမည်သို့အဆုံးသတ်မည်ကိုသိရှိရန်ခက်ခဲသည်။ အကယ်၍ Facebook ရှိအသုံးပြုသူများ၏လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကိုမျှဝေရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါက WhatsApp သည်သိန်းနှင့်ချီသောအသုံးပြုသူများကိုဆုံးရှုံးနိုင်ပြီး၎င်းသည်သူတို့သွားနေသည့်အရာများကိုကောင်းစွာမရှင်းပြဘဲဖြစ်သည်။ သူတို့နှင့်အတူလုပ်ဖို့။ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်သည်မည်သူမဆိုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမျှဝေရန်ခွင့်ပြုချက်မပေးပါ။ ၎င်းကိုဘာလုပ်ရမည်၊ မည်သို့အသုံးပြုမည်ကိုမသိဘဲသင်သည်အခြားသို့မဟုတ်အခြားလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application များကိုစတင်အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ငါနဲ့တူရင်မင်းဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်မယ်ဆိုရင် WhatsApp အတွက်အခြားနည်းလမ်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
4 Hangouts ကို
5 Skype ကို
7 BlackBerry ကို Messenger ကို
သုံးစွဲသူများ၏ပံ့ပိုးမှုရရှိထားသော WhatsApp အတွက်အနည်းငယ်သောနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုမှာအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဆက်လက်၍ တိုးတက်နေသည် ကွေးနနျးစာ။ ပြီးတော့ဒီလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application ဟာသုံးစွဲသူများကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာမပါ ၀ င်စေဘဲ၊ သူတို့လိုအပ်တာကိုအတိအကျပေးနိုင်တယ်။
Telegram ကနေကျွန်တော်တို့ထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာသေချာပါတယ် လုံခြုံရေးအသုံးပြုသူနှင့်မြန်နှုန်းကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ သူတို့၏အရည်အသွေး၊ စတစ်ကာများသို့မဟုတ်လက်ဆောင်များကိုလျှော့ချခြင်းမရှိပဲဓာတ်ပုံများပေးပို့ခြင်းနှင့်အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်တင်စကားပြောခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုစာဝှက်ဖြင့်ရေးဆွဲပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် အချိန်မှစ၍ မိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရသာ။
Telegram ကိုမစမ်းသေးဘူးဆိုရင်မင်းရဲ့အချိန်ကိုဖြုန်းတီးပစ်လိုက်ပြီးနောက်မှာ WhatsApp ဆိုတာဘာလဲဒါမှမဟုတ်သူရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမမှတ်မိတော့ဘူး။
WhatsApp ကိုစျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့် အချိန်မှစ၍ ၎င်းမှာလည်းအလားတူဖြစ်သည် လိုင်း။ အချို့နိုင်ငံများတွင်၎င်း၏အောင်မြင်မှုသည် Facebook ပိုင်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့စနစ်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ အခြားနိုင်ငံများတွင်မူလုံးဝသတိမပြုမိဘဲရှိနေသည်။
လိုင်း၏ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ် ၎င်းသည်အလွန်ကွဲပြားသောမျက်နှာပြင်၊ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ရွေးချယ်စရာများနှင့်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခု၊ အလွန်အာရှထိတွေ့မှုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အားသာချက်များအနက် VoIP ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ် PC ဗားရှင်းအားဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကွန်ပျူတာမှတစ်ဆင့်ခံစားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ Line သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအားသာချက်များနှင့်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များကမ်းလှမ်းပေးသော်လည်း၊ စပိန်တွင်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအသုံးပြုသူများစွာသည် WhatsApp နှင့်မိတ်ဆွေများ၊ သူတို့အခုအချိန်မှာစတင်အသုံးပြုပါ။
ရေးသားသူ: LINE ကော်ပိုရေးရှင်း
WhatsApp ကိုကျွန်ုပ်တို့အားယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိသောအချက်များအနက်မှတစ်ခုမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသောသီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်အထူးသဖြင့်မကြာသေးမီရက်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂလိကဒေတာများနှင့်ပြုလုပ်သောအရာများဖြစ်သည်။ သင်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်မြင့်မားပါကအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် အက်ဒွပ်စနိုးဒင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြစ်သောအချက်ပြ.
ဒီအလွန်လုံခြုံတဲ့လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးလုပ်ငန်းသုံးပရိုဂရမ်ရဲ့အားသာချက်များထဲမှာ၊ စာတိုအားလုံးကိုစာဝှက်တာ၊ စကားဝှက်တခုခုနဲ့စာတချို့ကိုပိတ်ဆို့တာတို့၊
လွန်းအချက်ပြအပြင် ဤအမျိုးအစားရှိအခြားအပလီကေးရှင်းများစွာတွင်ကဲ့သို့အသံဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုကိုခွင့်ပြုသည်၊ သူတို့၏အသံသည်စာဝှက်ထားသော်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာထူးခြားချက်ရှိသည်။အားလုံးမက်ဆေ့ခ်ျကိုအတူဖြစ်သကဲ့သို့။
အချက်ပြ - ပုဂ္ဂလိကစာတိုပေးပို့ရေး
မကြာသေးမီကာလများက Google သည် Google Allo နှင့်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုစျေးကွက်တွင်ထင်ရှားပေါ်လွင်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းယနေ့တွင်၎င်းအမျိုးအစားကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ Hangouts ကို.
ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီကြီးမှဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမည်မျှခံထိုက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်။ မရပါ မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းသာမကအပြန်အလှန်အားဖြင့်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအသံခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုမိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းအားလုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး desktop ဗားရှင်းတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဂူးဂဲလ်ကထပ်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ် Google က Alloသင် Hangouts ကိုထပ်မံမြှင့်တင်ရန်စဉ်းစားသင့်သော်လည်းဖြစ်နိုင်သည်မှာ၎င်းသည်ဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application တစ်ခုဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းအစွမ်းထက်သော WhatsApp အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဂန္ထဝင်ဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application တစ်ခုဖြစ်သည် Skype ကိုကံမကောင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကျော်ကြားကျော်ကြားလျက်ရှိသည်။ သို့သော်လည်းယနေ့ WhatsApp နှင့်သုံးစွဲသူများစွာသူတို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ များတွင်အသုံးပြုရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နေဆဲပင်။
iPhone အတွက် Skypeအခမဲ့
လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application သည်သင်နှင့်သိပ်မရင်းနှီးပါ WeChat ဒါပေမယ့်လက်ရှိထက်ပိုရှိပါတယ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်သုံးစွဲသူသန်း ၁၀၀ ရှိသည်။ စပိန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများစွာတွင်၎င်းသည်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လူသိမများသေးသော်လည်းအမှန်မှာသုံးစွဲသူအမြောက်အများနှင့်အတူ၎င်းကို WhatsApp ၏အခြားရွေးချယ်စရာစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းရန်အခွင့်အရေးကိုကျွန်ုပ်တို့လက်လွတ်မခံနိုင်ပါ။
၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုကြည့်ရှုလျှင်, အောင်မြင်မှုတရားမျှတထက်ပိုသည်နှင့်အခြားများစွာသောကဲ့သို့ဖြစ်၏ မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ရန်နှင့်လက်ခံရန်ခွင့်ပြုသော်လည်းအရည်အသွေးမြင့်မားသောဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည် ရရှိနိုင်သည့်ဗားရှင်းများစွာအနက်မှတဆင့်လျှောက်လွှာကိုလည်းအသုံးပြုပါ။ နောက်ဆုံးရလဒ်အနေဖြင့်၎င်းကို Trust မှအသိအမှတ်ပြုပြီးအသုံးပြုသူများစွာနှစ်သက်ကြသည်။
နိုင်ငံများစွာ၌အချိန်သည် WeChat အတွက်အချိန်မရောက်သေးပါ၊ သို့သော် WhatsApp ၏အားနည်းချက်များသည်မကြာမီ၎င်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုဖြစ်လာနိုင်ပြီးမည်သည့်နေရာတွင်မဆို၎င်းကိုစတင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
BlackBerry ကို Messenger ကို
WhatsApp မတည်ရှိမီကတည်းကသုံးစွဲသူများစွာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ BlackBerry ကိရိယာများတွင်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application တစ်ခုရှိပြီးဖြစ်သည်။ မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းငါတို့ပြောနေတာပဲ BlackBerry ကို Messenger ကို လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိထောင်ပေါင်းများစွာသောလူများအသုံးပြုသောဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် BlackBerry နေထိုင်သောအကျပ်အတည်းနှင့်စျေးကွက်တွင်၎င်း၏အကန့်အသတ်ရှိခြင်းသည်မည်သူမျှမဆုံးရှုံးနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ မှ BBM ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိသေးပါ။
လူတိုင်းနီးပါးသိပြီးသားထက်ပိုသောဤဝန်ဆောင်မှုကိုကနေဒါကုမ္ပဏီကမြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် ဗားရှင်းများသည် BlackBerry ကိရိယာများအတွက်သာမကအောင်မြင်မှုနည်းပါးသော iOS နှင့် Android အတွက်ပါဗားရှင်းများဖြစ်သည်.
BlackBerry Messenger ဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်းတခုဖြစ်ပြီး၊ BlackBerry မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သကဲ့သို့၊ အရာဝတ္ထုအားလုံးနီးပါးကိုနီးပါးဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းမရှိပဲဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ယခုသူသည်မိမိကိုမိမိထပ်မံရှာဖွေရန်ကြိုးစားနေသည်။ သူအောင်မြင်နေပုံရသည်။ ယခုအခါ၎င်းတို့သည်သုံးစွဲသူများစွာအတွက် WhatsApp နှင့်အစားထိုးသည့် BBM နှင့်ကောင်းမွန်သောခြေလှမ်းများလှမ်းနေပြီဖြစ်သည်။
BBM - မရှိတော့ပါ
ရေးသားသူ: BBM ။
ယနေ့တွင် စျေးကွက်တွင် WhatsApp ကိုအခြားရွေးချယ်စရာများစွာရှိပြီးအမျိုးမျိုးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ပြworksနာမှာကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့အား Facebook မှပိုင်ဆိုင်သည့် application ကဲ့သို့ရွေးချယ်စရာများနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များအားပေးသည့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုရှာရန်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့သူငယ်ချင်းများ၊ အသိမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုများအားလုံးပါ ၀ င်သောအရာကိုရှာဖွေရန်မဟုတ်ပါ။
Telegram ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်အရမ်းဝမ်းနည်းပြီးလွမ်းဆွတ်မှုတွေနဲ့ WhatsApp ကိုစွန့်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရောင်းဝယ်ရန်ဆန္ဒမရှိသော်လည်းကမ္ဘာပေါ်ရှိလူကြိုက်အများဆုံးစာတိုပေးပို့ရေး application ဖြစ်လိုသော WhatsApp ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တွင်တိုင်ကြားချက်မရှိပါ။ ငါကဲ့သို့ပင်အချို့လူများနှင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားလိမ့်မည်၊ သို့သော်သူတို့၏အချက်အလက်များကိုလုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည့်အခြားသူများစွာမှာသေချာသည်။
WhatsApp မှအခြားလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်းသို့ခြေလှမ်းလှမ်းခြင်းသည်လူအများယုံကြည်သကဲ့သို့လုံးဝစိတ်ထိခိုက်စရာမရှိပါ ထို့အပြင်ပိုမိုမြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့် WhatsApp ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခြားရွေးချယ်စရာများနှင့်အသုံးပြုသူများသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းစာတိုပေးပို့ရေး application များစွာကိုအသုံးပြုနေကြသောကြောင့် Facebook ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်လူအချို့ကိုသာရှာဖွေခြင်း၏ပြproblemsနာများကတဖြည်းဖြည်းနည်းပါးလာသည်။
သင့်အတွက် WhatsApp အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာကဘာလဲ။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » WhatsApp ကိုအခြားနည်းလမ်း ၇ ခုဖြင့်အညီအမျှကောင်းသို့မဟုတ်ပိုကောင်းသည်
Rodolfo ဟာနန်ဒက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
ငါ viber ကိုရွေးခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်တင်အမေရိကမှာနောက်လိုက်များစွာရှိနေလို့ပဲ။
Rodolfo Hernandez အားပြန်ပြောပါ
USB Type-C Audio အတွက်စံအသစ်
Galaxy Note7တွင်ပြိုင်ဘက်များရှိပြီးအချို့သော Samsung အဝတ်လျှော်စက်များသည်ကြိုတင်အသိပေးမှုမရှိပဲပေါက်ကွဲတတ်သည်